Inqununu balance yesilayidi kunye nenzala scheme intlawulo ngqo-line
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Inqununu balance yesilayidi kunye nenzala scheme intlawulo ngqo-line
Uboleke imali, kwaza kwabuyekezwa ngendlela kwangaphambili ngexesha yokuboleka.
eqhelekileyo inqununu balance isilayidi cebo lokuhlawula inzala ethe ngqo phakathi kwabo.
Oku, ezemali abathengi kunye ikhadi lamatyala indlela lisetyenziswa, ezifana eziluncedo nezingeloncedo yi Ngaba loo nto ibalulekileyo ntoni na.
ezinxulumene / inqununu kunye fixed-umyinge wenzala olujikelezayo sakho ezinxulumene
/ na inqununu fixed-rate olujikelezayo sakho
Yintoni inqununu balance yesilayidi kunye indlela intlawulo inzala ethe ngqo?
inqununu balance zeslayidi indlela intlawulo inzala ethe ngqo into ngokuqhelekileyo obizwa ngokuba "imali eseleyo isilayidi olujikelezayo indlela".
njengoko umahluko enye indlela intlawulo, isixa sokuhlawula esilungiselelwe ukuboleka ayitshintshi iye yaba luphawu.
Ukongeza, ekubeni ukuboleka inkqubo esijikelezayo, naye kwindawo ukuba nomntu oqhubeka ebolekiweyo ayidluli kumda.
enye kaninzi kubonwa kwi-mboleko card, kwiminyaka yakutshanje zezimali kumthengi ukuba ukuboleka imali esisiseko usebenzisa le ndlela ezininzi. Xa ukusebenzisa le esisikhupheli sokuxhaphakileyo
liya kuthi ukuba indlela emehlweni. imizekelo ezithile
inqununu balance yesilayidi kunye nenzala ethe ngqo scheme lokuhlawula
umzekelo 200,000 yen waboleka ngomyinge wenzala we-14%, i-mali ukuze ibe seyibuyisiwe emva kwenyanga enye zezi zilandelayo.
(20 Man × 14%) × (30 ÷ 365 iintsuku)
sasemini 4 servings, nisingasinga, nina nithi ukuba akukho isixa esikhulu kunene imali. imbuyiselo
iye ihlawulwe imali intlawulo yenyanga ezinzileyo ziya kwahluka ngokuxhomekeke eseleyo. Ukuba wathabatha inkqubo, ezifana nokwanda
eliphakathi, makhe ukhumbule ukuba ngamnye xesha iintlawulo nazo phezulu.
balance inqununu isilayidi cebo lokuhlawula inzala ethe ngqo kwi inqununu balance yesilayidi kunye indlela intlawulo inzala ethe ngqo kukuba kulula ukuba wenze izicwangciso ukuze imali kwemali qho ngenyanga ngemali.
Ngenxa yesi sizathu, asengozini ngaphantsi kwe zibuyiswe naliphi na ithuba ngokungenankathalo. Ezifana
abahlala bodwa, ulawulo imali yakho, nabani owayeza kuba yindlela lokuhlawula iingcebiso.
Ukongeza, ngokuthi eboleka inkampani, kunokwenzeka ukuba ndithe kuncitshiswa iintlawulo.
Eli lixesha lokuhlawula, ukuba bangaphantsi kwe ekuqaleni oyinhloko, nto inokwenziwa le woyibingelela ezifana umnxeba okanye ofisi. Ezifana
esibhedlele ngesiquphe, nokuba Okwenzekayo naliphi na ithuba lembandezelo, uye umngcipheko kwakhona lula ukuqinisekisa ukuba intlawulo awukwazi ukwenziwa.
Ngapha koko, xa iindleko ngesiquphe kwenzeke, i inzuzo enkulu yokuba ukwazi ukuboleka imali eyongezelelweyo xa kukho igumbi phezu imali ebolekiweyo. Kwimeko ukusetyenziswa
mboleko card, ukongeza ATM abazinikeleyo naye, nayo iye ziyafumaneka kwi-ATM yevenkile lula. Ukuba
iintlawulo zenyanga ukuya ngokuqinileyo, uya ukuba kulula ukuseka umjikelo ngoku aboleka kuphela xa kuyimfuneko isivuno.
esimweni inqununu balance yesilayidi kunye cebo lokuhlawula inzala ngqo-line < Le esimweni / h2>
balance isilayidi inqununu kunye indlela intlawulo inzala ethe ngqo, kukho ityala apho uninzi intlawulo iba nomdla, oko kuchazwe oko. Xa
bayaqhubeka ukuyibuyisa imali ubuncinane mali inikezelwa qho ngenyanga, sisekhona na imali yentlawulo kakhulu, loo nto ayithethi ukutshintsha umthwalo wallet yakho.
yoko, uya kuhlaselwa yi wento engekhoyo wokuba kukho ngeendleko yenyanga ezinzileyo, nina indlela ukuhlawula kuba kude.
Ngoko ke, ukuba anithanga ukusebenzisa ekuncedeni kunye iliso izicwangciso kwixesha elifutshane, hayi ekuhambeni kwexesha, nayo lokuhlawula uza kuphinda kuphela ngonaphakade.
Oku kuyinyaniso ngayo nayiphi na intlawulo, kodwa Ukuba uthe akwambuyisa xa ungakwazi ukubuyela, kuya kukhokelela ekubeni kangangokuba kamva Bacinezela intamo yakhe.
Ukongeza, kwimeko ukwenza zokuboleka endleleni, kufuneka ukwandisa isixa semali ngexesha lokuhlawula, oko azi ukuba azisekho kwaphela lincitshiswe.
ngokuthathwa usoloko 'ukubuyela ", Zama ukuba bakhumbule ukusebenzisa izicwangciso.
Inqununu balance yesilayidi kunye nenzala ethe ngqo indlela intlawulo, xa isixa semali okanye zokuboleka imali ubhalisela ukuboleka, koko intlawulo yenyanga ezahlukeneyo.
kwemali isixa isicwangciso kwakhona lula ukuba kumisa, kukuba kwakhona uxolo lwengqondo nabani na ufuna ukuboleka kuba inzuzo yemali okokuqala.
waba esalele awulibale umhla intlawulo kulo, ukuba uya kuba nako ukwenziwa ukunciphisa iimpazamo.
kunjalo luncedo elinye icala, ukuba awufuni ukwenza isicwangciso intlawulo ngokuqinileyo, makwenziwe ngenyameko eziza kulandelwa ubomi ibuyisela umdla kuphela emva ngonaphakade. Njengaxa ukuba
imali angaba namandla, ndawonye ukwenza iintlawulo, yaye athathele engqondweni ukwenzela ukunciphisa inani amaxesha zokuyibuyisa nkqu kancinane, wathi ibe yindlela elungileyo kulula ukuyisebenzisa. Le esimweni
inqununu balance zeslayidi indlela intlawulo inzala ethe ngqo, kukho ityala apho uninzi intlawulo iba nomdla, oko kuchazwe oko. Xa
imali angaba namandla, ndawonye ukwenza iintlawulo, yaye athathele engqondweni ukwenzela ukunciphisa inani amaxesha zokuyibuyisa nkqu kancinane, wathi ibe yindlela elungileyo kulula ukuyisebenzisa. I
Inqununu balance yesilayidi kunye nenzala ethe ngqo indlela intlawulo, xa isixa semali okanye zokuboleka imali ubhalisela ukuboleka, yahlukile intlawulo yenyanga.
imali angaba namandla, ndawonye ukwenza iintlawulo, yaye athathele engqondweni ukwenzela ukunciphisa inani amaxesha zokuyibuyisa nkqu kancinane, wathi ibe yindlela elungileyo kulula ukuyisebenzisa.